Smart City – Prakash Acharya
डियर काठमाण्डौ बासी ! तिमी यस्तो ठाउँमा कसरी बस्न सक्छौ? भर्खरै मात्र म तिम्रो शहर भित्रिए, तिम्रो शहर देखेर मलाई भुपी शेरचनको कविता याद आयो ! सायद ८० प्रतिशत भन्दा बढि काठमाण्डौ बासिले भुपिलाई चिनेका सकेका पनि छैनन् होला तर करिब ३० वर्ष आगाडी नै उनले काठमाण्डौलाई नै देखेर यो कविता रचेका थिए। साँघुरो […]